करोडपतिले छतबाट यसरि गराए पैसाको वर्षा
न्यूजअभियान | प्रकाशित मिति : २०७५ पौष ६ शुक्रबार |
एजेन्सी । एउटा ठुलो भवनको छतबाट पैसा उडाउँदै गरेको अवस्थामा आइतबार हङकङ्गका एक व्यक्ति पक्राउ परेका छन् । च्यानल न्युज एसियाका अनुसार चीन मुलका २४ वर्षीय वुङ्ग चिङ्ग किट आइतवार साझ लामवोर्गिनीे स्पोर्टस कार कुदाउदै छिमेकी देश हङकङ्गको शाम शुइ पो पुगेका थिए ।
रिपोर्टका अनुसार वुङ्ग एक करोडपति हुन् । उनको यस्तो सौभाग्य क्रिप्टोकरेन्सि विटकोइन पैसा छाप्ने डिजिटल मेशिनको कारोवारबाट बन्न सफल भएको हो । उनि हङ्गकङ्गका एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हुन् ।
पैसाको वर्षात पछि भाइरल बनेको भिडियोमा उनी अग्लो भवनको छतमा उभिएर ठुलो मात्रामा नगद उडाउदै गरेको देखिन्छ । जसको तल पैदल यात्रिको भिड लागेको छ । त्यहाँ जम्मा भएका दर्जनौ मानिसले उडाएको क्यास टिप्दै गरेको सो भिडियोमनर्फत देख्न पाइन्छ ।
डेलिमेलका अनुसार पक्राउ पर्नुअघि वुङ्गले फेसवुकमा प्रत्यक्ष प्रसारण दिँदै थिए । सोहि दौरान उनले करिब २ लाख हङकङ्गयिन डलरको वर्सात् गराइसकेका थिए । उनले सामाजिक सञ्जालमा तस्विर शेयर गर्दै धनिहरुलाइ लुटेर क्यास फाल्दै गरिवहरुको सहयोग गर्ने बताएका छन् ।
चन्द्रमामा कपासको बीउ टुसायो
किन चिसिदैछ पतिपत्नीकाे शयनकक्ष ?
३० दिन भोकै बसेका पाष्टरको कुपोषणका कारण मृत्यु
एउटा जहाजमा एकजना यात्रु
आफ्नै लुगाले मोबाइल चार्ज !
नेपाल घुम्न आउने विदेशीका धन्दा डरलाग्दा ! ...देहव्यापार सम्म
फेसबुकमा कस्तालाई साथी बनाउने, कस्तालाई नबनाउने ?